Kwayedza Pilot add-ons iyo yatinogona kushandisa muMozilla Firefox | Linux Vakapindwa muropa
Pasina nguva refu yapfuura takataura newe nezve Kwayedza Pilot, chirongwa chitsva chekuvandudza mukati meMozilla yeMozilla Firefox. Iyi purogiramu nyowani iri kuve nekubudirira kwakawanda uye iri kuunza akawanda maficha maficha kune akasununguka ewebhu browser kunze uko.
Kubudirira kweaya maTest Pilot plugins uye chirongwa chekuvandudza pachacho chakadaro mamwe eaya ekuwedzera-ons kana maficha matsva akatotamira kubazi hombe uye rakatsiga reFirefox. Nezve izvi, mukana wekushandisa kana kuiisa mune yedu vhezheni yeFirefox.
Tevere isu tichaenda kukuratidza mamwe eaya ma-add-ons ari kushanda kuyedza kana mamwe achangovharwa atinogona kuwana kuMozilla Firefox yakagadzikana. Pakazara pane gumi mabasa matsva anozotibatsira kuve nekubudirira uye kunobatsira kubhurawuza webhu.
6 Peji Shot
7 Kuchengetedza Kuchengetedza
9 min muzambiringa
11 Ini ndasara neine chete yekuwedzera?
Ini ndinofunga iyo nyeredzi plugin yeTest Pilot iri Side View, chinhu chitsva icho inotibvumidza kuvhura akasiyana mapeji ewebhu mukati mewebhu browser. Uye vazhinji venyu muchandiudza Asi ndizvo izvo tabo nyowani nemahwindo zviri, handiti? Hongu, asi Kurutivi rwekutarisa kunopatsanura tab kana hwindo uye kuita diki diki, sekunge yaive padivi, chinongedzo kana url yataratidza inoratidzwa. Nekudaro, mushandisi haafanire kuchinja tabo kana kupatsanura desktop muzvikamu zviviri, asi pachinzvimbo ane mukana wekushanda nenzira iyi.
Zvakare, Side View ipuru plugin yevagadziri vewebhu sezvazviri iyo maonero anoburitswa neSide View ndiyo inoteerera kana nharembozha yeiyo link, saka tinogona kukura munguva chaiyo tisina kushandisa zvimwe zvinowedzera muMozilla Firefox.
Side View oparesheni iri nyore kwazvo. Kana tangoisa, bhatani rinozoonekwa pane yepamusoro bar muchimiro chekatekete kakakamurwa. Paunenge uchidzvanya pairi, iyo hwindo rekumativi reSide View rinoonekwa. Iye zvino zvairi kushanda, isu tinongofanirwa kufamba newindo rehwindo uye kana tichida kuona chinongedzo muSide View, tinodzvanya kurudyi pane mbeva uye tigoenda kusarudzo "Vhura chinongedzo mubarutivi" kuitira kuti chinongedzo chiratidzwe muhwindo rerutivi.
Iko kuvhiya kuri nyore uye kana iwe ukaiisa iwe uchaona kuti yakapusa sei inoshanda uye hukama hwayo hwakasimba newebhu browser. Vazhinji vashandisi vatanga kuishandisa uye izvo zvakanaka sekuyedza kunobatsira kugadzirisa uye kuita kuti Side View ishande zvirinani.
Manotsi ndeyekuwedzera kuwedzera pane Side Side asi mumazuva achangopfuura yakagadziridzwa zvakanyanya. Manotsi ndeyekushandisa manotsi iyo inotibvumidza isu kuti tiwedzere zvinyorwa uye zvinyorwa pawebhu isu tinotarisa kana kuzvimiririra. Pasina nguva refu yapfuura, Firefox yakaburitsa chishandiso chinoshanda nenzira imwe chete, asi chinoshanda neMicrosoft Focus, webhurawuza reMozilla yeApple. Iwo manotsi mune ino application akawiriraniswa neManotsi uye pakati pemabhurawuza, izvo zvinoita kuti isu tive nesimba rine simba kwazvo manyorerwo.
Asi, kusiyana nemamwe maapplication akaita saEvernote kana Google Keep, Firefox manotsi anoshandisa kumaka kugadzira zvinyorwa uye ruzivo, chimwe chinhu chinoita kuti zvive nyore kunyora manotsi pane nharembozha uye kunyange nyore kuti ukwanise kuwiriranisa ruzivo pakati pezvigadzirwa.
Nezve iyo funtionability Isu tinongoda chete Firefox Sync account uye nekuisa ese manotsi plugin muwebhu browser uye mune app ye smartphone kana piritsi. Izvi zvichaita kuti zvinyorwa zvese zvifananidzwe uye zviwanikwe pane chero chinhu.
Ruvara yaive imwe yemapulagi ekutanga kuburitswa yeiyo Test Pilot chirongwa. Ruvara hausi mukwanisi uyo unotibatsira kubata mavara anoonekwa pamapeji ewebhu, asi asi iwo mukwanisi kana basa rinozotibatsira kushandura iyo pendi yemavara yeMozilla Firefox. Kuita munhu chinhu chinhu chinokosheswa nevashandisi vazhinji uye kusvika zvino izvo zvaireva kushandisa zviwanikwa zvakawanda izvo zvisina kana komputa kana yewebhu browser.
Ruvara runotibvumidza kupa kwakasiyana kubata kune webhu browser pasina kuikonzera kuti idye yakawanda zviwanikwa kubva pawebhusaiti kana kubva pakombuta. Tinogona kuisa Ruvara senge zvimwe zvese zvekushandisa, kuburikidza neyepamutemo Test Pilot webhusaiti.
Tumira mubatsiri wekutumira mafaera mahombe kune vashandisi vasiri padandemutande rako rega, ndiko kuti, kuburikidza neInternet uye yedu Mozilla Firefox browser. tuma Iri ibasa rakatangwa neMozilla mwedzi mishoma yapfuura, mhedzisiro yeshanduko yaro zvechokwadi mushure mekusiiwa kweFirefox OS. Iyo Test Pilot Tumira plugin inotibvumidza isu kushandisa iyo Send sevhisi kubva pawebhu webhu pachayo.
Izvo zvinobatsira kana isu tichida kutumira hombe mafaira kana mafaera mahombe paInternet uye hatidi kushandisa mamwe maratidziro akaita seP2P kana rwizi. Send ichatipa chinongedzo chakananga kumafaira atinoisa asi iyi link haigare nekusingaperi asi Tichava neawa rekudhawunirodha iyo faira kana zvisina kudaro iyo linki ichadzimwa uye hatizokwanisi kuzviita. Chishandiso chinonakidza chekuwedzera kune yedu yewebhu browser.
Kuchengetedza uye kuvanzika zvinhu zviviri izvo vashandisi vazhinji vanonetseka nezvazvo uye zvinhu zviviri izvo Mozilla isina kumbobvira yakanganwa, ndosaka kuvhurwa Firefox Lockbox, maneja wepassword watinogona kushandisa pane yedu smartphone uye yewebhu kubhurawuza kubva kune yedu smartphone. Firefox Lockbox inowedzera-on iyo inoshanda chete kune iyo iPhone panguva ino.
Firefox Lockbox inoshandisa 256-bit encryption kunyorera mapassword atinoshandisa. Uye zvakare, iyo data ichave iri muFirefox Sync account, nekudaro mukuwedzera pakuva nemapassword akachengetedzeka, tichava nemukana wekuve nemapassword aya pane chero chishandiso cheIOS chatinacho. Zvinoita pasina kutaura kuti kushandisa Firefox Lockbox isu tinoda account yeFirefox Sync, iyo browser yewebhu yeMozilla Firefox pane yedu iPhone kana iPad woisa Test Pilot.
Peji Shot mubatsiri uyo anotibvumidza isu tora zvidzitiro zvemapeji ewebhu atinoshanyira uye toachengeta sekunge iwo mawebhu ekubatanidza. Aya masikirini achave akachengetwa sezvo Pocket inochengetera zvinongedzo, ndiko kuti, ivo vanozochengetwa mukati mewebhu browser uye ichave iripo kusvikira isu tada kana patinoda.
Izvo zvichatibvumidzawo isu vagovana iwo masikirini kuburikidza nevezvenhau. Anobatsira kwazvo mukwanisi kana isu tichiwanzoshanda nema skrini. Iyo Peji Shot yekumisikidza yakafanana nemamwe ese eTest Pilot plugins.
Kuchengetedza Kuchengetedza ipulagi-in yakagadzirwa kuitira kuti mawebhu webhu asagone kuunganidza iyo yega data inogara muwebhu browser. Yakagadzirwa mushure mekukakavadzana kweFacebook uye kutengeswa kwedata kumakambani uye izvo zvakaita kuti mukwikwidzi atore kune hama, kunyangwe isiri ephemeral, mukurumbira.
Pfungwa yeiyi plugin ndeye ipa zvakanakisa zvekuvhura zvakavanzika pasina kusiya zvimwe zvinhu zvetsika kubhurawuza. Nekudaro kushandiswa kweiyi plugin. Uye zvakare, Track Dziviriro inotiratidza iwo mwero wekuchengetedzwa kwemapeji ewebhu atiri kushanyira pamwe neruzivo rwakanangana nehukama hwedu.
Midziyo ndeimwe yekuchengetedza plugin iyo yandinotenda kuti yatovepo seyakazvimirira plugin. Pfungwa yeContainers ndeyekugadzira akasiyana profiles kana mhando dzevashandisi izvo zvinotibvumidza isu kuva nechengetedzo yakachengeteka kana isingazivikanwe nekuda kwekuparadzaniswa kwekufamba pakati pemaprofiles aya.
Iko kushanda kweContainers kwakanyanya kufanana neiyo Google Chrome Profiles system pane iyo purogiramu yeprofile yeTOR network, iyo pachezvangu inoita kuti ndiishandise seye Chigadzirwa chinokwenenzvera kwete sekuchengetedza muchengeti, mune chero mamiriro ezvinhu zvinonakidza uye zvinobatsira kwazvo kana tikapotsa zvambotaurwa Google Chrome basa.
Vazhinji vedu tinoshandisa Mozilla Firefox kutarisa mavhidhiyo, kungave kubva kuYouTube kana kubva kuVimeo. Min Vid mubatsiri uyo anotibvumidza isu kuona YouTube kana Vimeo mavhidhiyo munzira yakadzikiswa. Izvi zvichatibvumidza kusevha paInternet, tichiteerera kurira kweYouTube tisinga fanirwe kurodha rese YouTube webhusaiti uye mamwe mabasa ayo. Izvo zvinobatsira kana isu tikashandiswa kushandisa YouTube semahara Spotify.
Tab Center ipulagi yekugadzirisa Firefox. Pfungwa yeTab Center iri fambisa Firefox tabo kubva kumusoro kuenda kudivi, kungofanana nemamwe mabhurawuza ewebhu seOpera ita. Tab Center iplagi inotibvumidza isu kuti tiwedzere kubudirira uye nekushandura webhu browser kunyangwe tikashandisa inodarika imwechete komputa, pamwe kushandiswa kwemubatsiri uyu hakuna zvakunobatsira. Chero zvazvingaitika, iri sarudzo yakanaka yekugadzirisa Firefox usingatsamwisi webhu browser kana kuirodha nekodhi isingakoshi inodzora kubhurawuza pawebhu.
Ini ndasara neine chete yekuwedzera?
Takaita runyoro rwakakwana rweTest Pilot plugins, asi havazi ivo voga kunze uko. Sezvatakambotaura pakutanga kwechinyorwa, kubudirira kweTest Pilot Zvinoshamisa uye izvo zvakagadzira kune akawanda matsva ekuwedzera uye mabasa uye mamwe anokurumidza kuenda kugadziriro yenyika. Chero zvazvingaitika, ini ndinokurudzira kuti iwe nguva nenguva uongorore zvinowedzerwa sezvo zvitsva zvingaita sezvingatibatsire nemamwe mabasa akajairika.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Iyo Test Pilot yekuwedzera-iyo yatinogona kushandisa muMozilla Firefox